တစ်ဦးကဒိန်းမတ်နိုင်ငံ Holding ကုမ္ပဏီကအခြားနိုင်ငံများတွင်အခြေစိုက်အခြားကုမ္ပဏီများ (ခွဲများအဖြစ်လူသိများ) တွင်ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာပိုင်ဆိုင်သော 100% နိုင်ငံခြားရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကဒိန်းမတ်ပုဂ္ဂလိက Holding ကုမ္ပဏီတစ်ခု "Anpartselskab" ( "APS") ဟုခေါ်တွင်သည်။
နောက်ကျော 1999 အတွက်, ဒိန်းမတ်ဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီများသည်နိုင်ငံခြားခွဲများအတွက်ရှယ်ယာများကျင်းပရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ 2009 ခုနှစ်, ဒိနျးမတျအစိုးရသည်နိုင်ငံတကာကော်ပိုရိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်ဒိန်းမတ်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုဒိနျးမတျအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း။ အဆိုပါ 2009 ဒိန်းမတ်အခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒအသီးသီးကိုင်ဆောင်တစ်နှစ်ကာလသုံးနှစ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းအပေါ်သဘောပေါက်ခွဲဝေနှင့်အရင်းအနှီးအကျိုးအမြတ်မှလျှောက်ထားဒိန်းမတ်ပါဝင်မှုကင်းလွတ်ခွင့်တိုးတက်လာသည်။
နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအခွန်အခများမှဘာသာရပ်မြတ်များငွေပေးချေမှုလက်ခံရယူနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အခွားသောအခှနျဆိပ်တရားစီရင်မှုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအကျိုးခံစားခွင့်မပေးပါဘူး။ ခွဲဝေအပေါ်တစ်ဦးမျှအခွန် status ကိုအဘို့အခွအေနအေတစ်ခု entity ဒိနျးမတျကုမ္ပဏီအနည်းဆုံး 25% ကိုပိုင်ဆိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ပက်စီနှင့်အခြားကြီးမားသောနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအတိတ်နှစ်အနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများမှကိုင်ပြီး 500 ဒိန်းမတ်ကျော်တည်စေပြီ။ ပက်စီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, အပက်စီဒိန်းမတ်ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ, တဦးတည်းအခွန်ရှေ့နေများကသေးငယ်တဲ့ကိုပင်ဟေဂင်ရုံးကနေစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝယ်လိုအားဒိန်းမတ်အတွက်ပြောင်းလဲနေသောကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီစက်မှုလုပ်ငန်းဖန်တီးခဲ့သည်။
အနှစ်သာရမှာတော့ဒိန်းမတ်လုံးဝအခွန်လွတ်ကျင်းပနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒတ်ခ်ျကျင်းပနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီများသည်မြောက်မြားစွာကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်များထံမှဝင်ငွေခံယူခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းစွာကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိအခြားကော်ပိုရေးရှင်းမှသူတို့ကိုရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုင်ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများကသူတို့အခွန်အခမဲ့ရန်ပုံငွေများစွမ်းရည် "ကိုရှောက်သွား" အတွက်တကမ္ဘာလုံးကျော်ကြားဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ကြသည်။ စုစုပေါင်းအခွန်အခမဲ့အာမခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနေသမျှကာလပတ်လုံးအခြို့သောပိုင်ဆိုင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီထံမှဆင်းသက်လာဝင်ငွေအဘို့အဒိန်းမတ်အတွက်အခွန်ကောက်ကြသည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါပဲ။
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားများတစ်ဦးဒိန်းမတ်ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီအပေါငျးတို့သရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အခွန်လွတ်: အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ် အခွန်တစ်ခုတည်းကိုသာနိုင်ငံခြားရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သည့်အခါ။ မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအခွန်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားများများအတွက်ခွဲဝေအခွန်မရှိပါ။ ကျင်းပနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီများမှပိုင်ဆိုင်နိုင်ငံခြားသားများအဘယ်သူမျှမဝင်ငွေခွန်။ သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များထံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအစီရင်ခံအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အခြားသူတွေနှင့်အတူ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများ: ယင်းပိုင်ကုမ္ပဏီစတော့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ထားသည့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: တစ်ဦးကကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီတဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်။
• အနိမ့် အနိမ့်ဝေမျှမယ်မြို့တော်: နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်အလွန်နိမ့်သည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင် / ဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်လည်းတစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါသည်စာရင်းကိုင်စနစ်: အဆိုပါဒတ်ခ်ျအစိုးရအနေဖြင့်တိကျသောစာရင်းကိုင်စနစ်အားမလိုအပ်ပါဘူး။
• အင်္ဂလိပ်: အများစုမှာဒတျချြနိုင်ငံသားများကောင်းစွာအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်။
ကုမ္ပဏီအမည်အားအခြားမည်သည့်ဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုဆင်တူမဖွစျနိုငျနေစဉ်, ကမဆိုဘာသာစကားတွင်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်အတိုကောက် "APS" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
ဒိန်းမတ်တစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မျှမျှတတရိုးရှင်းပါသည်။ အနည်းငယ်စာရွက်စာတမ်းများကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ် CVR အရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့သောအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ကုမ္ပဏီများအေဂျင်စီနှင့်အတူတင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်သည်။
တစ်ဦးဒိန်းမတ် Holding Company ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်ဖြစ်ပါသည်: တစ်ခု "APS" (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်€ 125,000) သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည့်ကြင်နာအခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ပံ့ပိုးမှုများအတွက်ညီမျှသောအဘို့အ 10,700 DKK ။ an "APS" သူ့ဟာသူအတွက်ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုမထားပေ။
တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်သာနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များမဆိုတိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ရှယ်ယာရှင်များ၏နံပါတ်မန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ တိုင်းရှယ်ယာရှင်အခွင့်အရေးများမဲပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ကရှိနိုင်ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကကျင်းပနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများနှင့်မန်နေဂျာများဒိန်းမတ်အတွက် domiciled ခံရဖို့မလိုအပ်ပါနှင့်မည်သည့်နိုင်ငံကနေနိုင်ပါတယ်။
အစိုးရအသတ်သတ်မှတ်မှတ်စာရင်းကိုင်နှင့်စံချိန်စောင့်ရှောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမလိုအပ်ပါဘူး။ Accounts ကိုအများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သောနှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းကိုသာနိုင်ငံခြားစတော့ရှယ်ယာ (အစုရှယ်ယာ) ပိုင်ဆိုင်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများမှကော်ပိုရိတ်အခွန်ပေးဆောင်ကြပါဘူး။
အဆိုပါနေထိုင်သူကုမ္ပဏီရှယ်ယာမြို့တော်၏ 10% ၏နိမ့်ဆုံးရရှိထားသူအဖြစ်ရှယ်ယာများရောင်းချခြင်းကနေမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ရှည်လျားအဖြစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ Dividends အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများပေးဆောင်အကျိုးစီးပွားမဒိန်းမတ်အခွန်ရှောင်အခွန်ရှိပါတယ်။ နှင့်အညီ, ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများ၏နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်များ၏အမြတ်အစွန်းမဝင်ငွေခွန်။
အဆိုပါ 2009 ဒိန်းမတ်အခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအက်ဥပဒေမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်အခများနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းအပေါ်အခြေပြုအုပ်စုသုံးစုသို့ရှယ်ယာရှင်များကိုခှဲဝေ:
1 ။ ရှယ်ယာမြို့တော်၏ 10% ထက်လျော့နည်းရှယ်ယာပိုင်ရှင်များမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ဖို့ "အစုစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ" နှင့်ဘာသာရပ်ဟုခေါ်ကြသည်,
2 ။ ရှယ်ယာမြို့တော်၏ 10% အထိ 50% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောရှယ်ယာပိုင်ရှင်များမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်၌နေသောသူ "လက်အောက်ခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ" ဟုခေါ်ကြသည်, နှင့်
3 ။ ရှယ်ယာမြို့တော်၏ 50% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ "ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ" လည်းမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်ဟုခေါ်ကြသည်။
သို့သော်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားဖြင့်ကျင်းပသည့်ဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီများသည် (မသက်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်း၏) တွင်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းအပေါ်သဘောပေါက်မြို့တော်အကျိုးအမြတ်ဒိန်းမတ်အခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။
လုပ်ငန်းခွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထံမှလက်ခံရရှိဘက်က Dividends, အ 2010 အခွန်ယခုနှစ်အဖြစ်မသက်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုကာလ၏အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ အစုစုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေလက်ခံရရှိ Dividends ဒိန်းမတ်အခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ 2010 ကတည်းကအဲဒီကင်းလွတ်ခွင့်ပေါ်ပေါက်ရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်တဲ့အနည်းဆုံးကိုင်ပြီးကာလရှိပါသည်။
သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အခြားသူတွေနှင့်အတူ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, အခွန်အခမဲ့အမြတ်အစွန်း၎င်း၏နိုင်ငံခြားငွေလုပ်ငန်းခွဲများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများမြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, အနိမ့်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်အပေါ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ခြင်း, တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်မရှိ, အစိုးရမြား: A ဒိန်းမတ်ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သောများစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင် စာရင်းကိုင်စနစ်အားမလိုအပ်, နှင့်အင်္ဂလိပ်အရှိဆုံးနိုင်ငံသားများအားဖြင့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။